ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ဗီယက်နမ်-မြန်မာချစ်ကြည်ရေး အသင်းဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Nguyen Manh Tien နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | Pyithu Hluttaw
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ဗီယက်နမ်-မြန်မာချစ်ကြည်ရေး အသင်းဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Nguyen Manh Tien နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း သည် ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဗီယက်နမ်- မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Nguyen Manh Tien နှင့် အဖွဲ့ဝင်များအား ၂၀၁၄ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့ ညနေ(၃)နာရီတွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဟနွိုင်းမြို့၊ ခေတ္တ တည်းခိုသည့် Sofitel Plaza Hotel ၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ချစ်ကြည်ရေးအသင်းများသည် အလွန်အရေးကြီးပါကြောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအလိုက် သက်ဆိုင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များ အချင်းချင်း တွေဆုံပြီး အမြင်ချင်း ဖလှယ်မှုများ ပိုမိုတိုးတက် အောင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားရန် လိုအပ်ပါကြောင်းဖြင့် ရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးကြသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယကနှင့်အတူ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသား လွှတ်တော်တို့မှ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌများဖြစ်ကြသော ဦးသိန်းဇော်၊ ဦးလှမြင့်ဦး၊ ဦးဋ္ဌေးမြင့်၊ ဒေါက်တာခင်ရွှေ နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြပြီး ဗီယက်နမ်- မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Nguyen Manh Tien နှင့်အတူ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ဥပဒေရေးရာ ကော်မတီဝင် Mr. Phan Van Quy ၊ ဟနွိုင်းမြို့ အမျိုးသား လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Mr. Pham Huy Hung ၊ ဟိုင်ဖုန်မြို့ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Mr. Nguyen Van Binh နှင့် ဗီယက်နမ်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးအသင်းမှ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ကြသည်။